Social Media Marketing bụ banyere Social, Ọ bụghị Media | Martech Zone
Wenezdee, Machị 10, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ihe ntanetị mgbasa ozi bụ ngwaọrụ. Ihe ntanetị mgbasa ozi bụ ngwanrọ. Enwere ngwaọrụ na ngwanrọ ndị ọzọ n'ebe ahụ. A ga-enwe ngwaọrụ ndị ka mma n'akụkụ akuku.
Twitter adịghị mkpa. Facebook adịghị mkpa. LinkedIn adịghị mkpa. Blọọgụ adịghị mkpa. Ha niile na - enyere anyị aka ịbịaru nso na ihe anyị chọrọ.
Ihe anyị chọrọ n'ezie bụ eziokwu.
Ihe anyị chọrọ n'ezie bụ tụkwasị obi.
Ihe anyị chọrọ n'ezie bụ ghọta.
Ihe anyi choro bu enyi.
Ihe anyi choro bu Enyemaka.
Ọnwa a bụ ọnwa buru ibu maka ezigbo ndị enyi m na teknụzụ. Ọ na-ebugharị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya na Indiana na California. Ọ na-aga na-agbakwunyere na obi nke Ndagwurugwu ya na ụfọdụ n'ime ndị ọzọ nkọ echiche toro ha na-elekọta mmadụ media ngwa explosively. (Ee, enwere m obere anyaụfụ).
Ngwa ndị otu ya wuru dị mfe (yabụ Twitter!) Mana ọ na-abanye n'obi ihe ndị mmadụ chọrọ n'ezie. Ha na-eme ka ọ dịkwuo mfe. Ihe ikpo okwu bu uzo esi abanye na ndi mmadu. M na-adịghị eleda ndị ịrịba talent na pụrụ ichetụ n'echiche ọ were ẹkedori ndị dị otú ahụ a jụụ ngwa, e nweghị obi abụọ. Ma ewu ewu bụ n'ihi na ihe ngwa na-enyere. Ọ na-enyere mmekọrịta aka anyị na-ahụbeghị.
M na-akụziri ndị ahịa na ndị ahịa banyere teknụzụ ka anyị wee nwee ike ịkwalite ya ma bulie mmetụta mmekọrịta ha na ọha. Ya mere, mgbe ahịa na-ajụ m, “Olee otú m ga-esi ọzọ [fanye ndị na-eso ụzọ, Fans, ndị debanyere aha, egbe, retweets], Ana m ewepu obere oge. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị abụghị ụlọ ọrụ mmekọrịta, ọ bụrụ na ị naghị eche banyere ndị ahịa gị, ọ bụrụ na ịdeghị ọdịnaya dị egwu, ọ bụrụ na ịnweghị nnukwu ngwaahịa, ọ bụrụ na ịnweghị ndị pụrụ iche, ọ bụrụ ' re dị ịrịba ama… Mgbe ahụ ọnụ ọgụgụ buru ibu agaghị abara gị uru.
Anọ m na-ekwu ya…. Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe nhazi. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ị na-ebuli, yabụ nnukwu ampilifaya na ụwa agaghị enyere aka! Kwụsị ịchọ ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na ndị na-elekọta mmadụ ka mma ka ha na-ewukwasị gị ọkaibe. Ọ bụ ihe ha na-agbasa na-eme ka ọdịiche dị.
O dika onye n’enweghi ike ukwe juo anyi juju n’ama egwuregwu. Anyị mejuchaa ámá egwuregwu ahụ, gịnịzi? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbụ abụ, anyị enweghị azụmaahịa na-ere otu tiketi! Ndi bekee dika m nwere ike ime ka ndi mmadu gosi ndi egwu… mgbe ahu obu oru gi itinye ihe nlere!
Ya mere,… kwụsị ịrịọ m ka m nwetakwuoro gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnagide ndị nke ị nwere ugbu a. Ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ gị 500 anaghị azụ ahịa gị, kedụ kedu ka isi nweta gị 5,000 ga - eme ka nsonaazụ gị ka mma? Nke a bụ ndụmọdụ… ọ ga-ebute nsonazụ ahụ okpukpu iri.
Ugboro iri na efu bụ efu.
Bọchị ụfọdụ Twitter agaghị anọ ebe a, Facebook agaghị anọ ebe a, LinkedIn agaghị anọ ebe a… ma anyị ga-arụ ọrụ na ọwa ọhụrụ ndị nwere ike ịga n'ihu na-eme ka ihe dị ntakịrị ntakịrị. Ngwurugwu mgbasa ozi ndị ahụ ka na-enweghị ike idozi isi okwu na-ama atụmatụ gị ọgụ. Ka anyi dozie ndi mbu.
Tags: elekọta mmadụ mediaSocial Media Marketing
Dị ka okwu a ma ama na-ekwu "Ọ bụrụ na ị daa atụmatụ, ị na-eme atụmatụ ịda". Ihe m na-ekwu bụ, ị gaghị enwe ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi na azụmahịa ma ọ bụrụ na ịnweghị atụmatụ dị mma iji kpata mgbalị gị. Ọ masịrị m mgbe ị na-ekwu "Social media bụ amplifier", ekwenyere m kpamkpam na nke ahụ!
Ya mere ndụmọdụ m bụ, kpara nkata usoro mgbasa ozi gị, wulite mmekọrịta siri ike ma bulie ọnụọgụ mgbanwe gị!